American Eagle Lady Liberty Coin 1 oz (Random Year) ngegolide entle 22K - Popular Jewelry
American Eagle Lady Liberty Coin 1 oz (Unyaka oQhelekileyo) Fine Gold 22K
Intsimbi exabisekileyo: Yenziwe nge-91.67% yegolide esulungekileyo, enobunzima be-1 oz.
Iveliswe yi-United States iMint eyaziwayo.
Imeko eqaqambileyo engavalwanga.
Iingqekembe zomntu ngamnye ziza ngeplastiki. Uninzi lwama-20 luza kwiibhubhu ezikhutshwe ngaminti.
Uthwala iidola ezingama-50 zeedola.
Ivunyiwe ukuba ibandakanywe kwii-IRA.
Ingqekembe yethenda esemthethweni e-US ngobunyulu kunye nobunzima buxhaswa nguRhulumente wase-US.
Okuchaseneyo: Inenekazi lenkululeko kunye netotshi esandleni sayo sasekunene kunye nesebe lomnquma ngesandla sasekhohlo esiya phambili kunye neenwele zakhe zihamba kwimvelaphi yelanga eliphumayo kunye nesakhiwo seCapitol.
Umva: Ukhozi oluyindoda olubambe isebe lomnquma libhabha ngaphezulu kwendlwane elinenkozi yegolide yabasetyhini kunye namantshontsho ayo, uyilo lukaMiley Busiek.
ubukhulu: 32.7 mm *
Ubunzima: Ilingana ne-1 Troy Ounce ye-24K (99.99%) (~ 33.93 Grams x 22K (91.67%) *
* Bonke ubunzima kunye nemilinganiselo iqikelelwa.
Nceda unxibelelane nathi ukuba uneminye imibuzo malunga nobunye ohlobo okanye izitayile, ukubakho, iinkcukacha ezithile, kunye ne-personalizaukhetho lwendibano.